SFI - PREO Utbildning - Västerås - Soomali | PREO UTBILDNING
Ku soo dhowoow SFI, iswiidhishka loogu tala galay qaxootiga Västerås
Iswiidhishka loogu talagalay ajnabiga (SFI) waa waxbarasho loogu talagalay qofka luqadiisa aana ahayn af iswiidhish. Waxaad baran doontaa aasaaska akhriska iyo qorista iswiidhishka. Waxaad sidoo kale ku tababaraneysaa inaad isticmaashid luuqadaan nolol maalmeedkaaga iyo shaqada mustaqbalka. Dhammaan waxbarashada waa lacag la'aan. Waxaad dooran kartaa inaad dhigatid inta lagu jiro maalinta, fiidkii ama waxbarashada masaafada.
Nagala soo xiriir!
SFI, iswiidhishka loogu tala galay ajnabiga
Annaga waxaad naga baraneysaa hagid iyo hagid macallimiin khibrad u leh SFI. Wadajir ayaannu samaynaa qorshe waxbarasho oo shakhsi ah oo ku habboon baahiyahaaga iyo xaaladahaaga. Halkan waxaad ku baran doontaa akhrinta, qorista, hadalka iyo fahamka luqadda iswidhishka – xilliga ay adiga kugu habboon tahay! Annaga waxad naga baran kartaa subaxa, galabtii ama fiidkii.
Waxa kale oo aad naga heleysaa
Qalabka shaqo raadintaada, sida CV iyo warqad shaqsi ahaaneed.
Waxbarashada xiriir dhow oo lala yeesho macallimiinta iyo ardayda kale.
Casharradu way kala duwanyihiin iyago oo ah casharro, daraasado dijitaal ah iyo tabobarro.
Isku darka SFI ee waxbarashada aasaasiga ah, waxbarashada dadka waa weeyn, dugsi sare ama shaqo kale.
Waddooyinka waxbarashada (Studievägar)
Koorsada 1 (koorsooyinka SFI A iyo B)
Kuwa haysta waxbarasho gaaban ama wax aana ku dhigan dalkooda hooyo.
Koorsada 2 (koorsooyinka SFI B iyo C)
Kuwa haysta waxbarashada dugsi hose dalkooda iyo sidoo kale kuwa haysta waxbarashada aasaasiga ah ee gaaban oo aqoonta waxbarashada leh.
Koorsada 3 (koorsooyinka SFI C iyo D)
Kuwa aqoonta waxbarashada leh, oo haysta waxbarashada dugsiga sare ama tacliinta sare ee dalkooda.
Ma dhamaysay SFI? Hadaba akhri iswiidhishka luqad labaad ahaan (SAS) Svenska som andraspråk
Sidan ayaad isku diiwaan gelineysaa
Si aad u baratid SFI, waa inaad sameysaa sahan lagu sameeyo Xarunta Waxbarashada Dadka Waaweyn (VUC) Vuxenutbidningscentrum.
Waxaad iska diiwaan gelin kartaa foomka e-foomka (e-formulär).
Waxa kale oo aad booqan kartaa VUC oo ku yaal Ingenjör Bååths gata 17, 722 12 Västerås, Isniin iyo Arbaca kasta. Xilliga.10 ilaa 12..
Koorsooyin cusub ayaa billaabma bil kasta marka laga reebo bisha Julaay. Ma haysanno qaybsameen mustaqbalka, oo koorsadu waxay socotaa sanadka oo dhan.